5 Sabab Oo Haweenka Quruxda Badan Saaxiib Aysan U Yeelan | Aayaha
Dadka waxay aaminsanyihiin in gabdhaha soo jiidashada leh ama quruxda badan ay leeyihiin saaxiib balse taasi mar kasta ma ahan mid shaqeysa, xaqiiqda waxay tahay in gabdho badan oo soo jiidasho leh aysan saaxiib lahayn marka maxay tahay sababta ay gabdhahaasi u lahayn saaxiib.
Aayaha Online, ayaa qeybta hoose idinkugu soo gudbineysa sababha ay gabdhahaasi ulahayn saaxiib.
1- Gabdhaha quruxda badan ma aaminaan ujeedooyinka ragga
Gabdhaha soo jiidashada leh way adagtahay inay nin aaminaan maxaa yeelay wey adagtahay in la ogaado haddii uu ninkaas kugu rabo waxaa tahay ama quruxda lee kugu rabo, gabdho badan ayaa qibrad xun ka heysta qaar kamid ah ragga kuwaas oo ka rabay kaliya inay la seexdaan quruxdooda darteed balse aanan aanan jacayl u qabin ama aanan ku rabin waxa ay yihiin.
Ragga oo ka baqa haweenka quruxda badan
Inta badan ragga ayaa la sheegaa inay cabsadaan haweenka quruxda badan waxay u heystaan inay aad u qurxantahay iska markaana aysan ka nabad galeen ragga kale kalsoonida ayaa ka dhunta marka ay u dhowyihiin gabar qurxan sababtoo ah intabadan haweenka quruxda badan waa doobab uu ninka eryanayo.
Haweenka qurxan oon hal nin aan ku ekaan
Gabadhaha aadka u shidan waxay wataan shuruudo markii ay nin dookhanayaan hal nina kumaba ekaadaan marka ragga kasoo bixi kara shuruudahaas ayaa aad u yar tanida waa sababta ay intabadan doobab u yihiin.
Nin kasta wuxuu u heystaa inay saaxiib leedahay.
Haweenka quruxda badan ayaa intabadan waxa ay yihiin doobab maxaa yeelay ragga ayaa waxa ay u heystan inay horey saaxiibo u lahaayeen markii u sidaas u qaatana waaba laga dafaa oo ma daahdo iskuma dhibaayo inuu la hadlo.
Ragga oo inta badan aaminsan in loo wada tartamo
Intabadan ragga wey necebyihiin tartanka ama naag lagula tartamaayo waana sababta ay uga fogaadaan hablaha quruxda badan waxay ogyihiin inay aad u qurux badanyihiin marka waxay u heystaan in nin kasta uu rabo, cabsida tartanka ayaa ka keenta in inta badan ragga ay ka fogaadaan hablaha qurxan waxay aaminsanyihiin inay ka qaadayaan niyad jab haddii ay shukaansadaan gabar hablo qurxan.